Mantra amin'ny vola
Miezaha manova ny toe-bolanao amin'ny fampiasana ny mantra amin'ny vola. Ny vibration sasany dia manampy amin'ny famoronana ny angovo azo avy amin'ny angovo izay hisy fiantraikany eo amin'ny foibe sy faritra misy ny fahatsiarovanao. Manampy amin'ny fotoana fohy indrindra i Mantras mba hanova tanteraka ny fiainany.
Mba hino ny herin'ny maîtiana dia aleo mamaky azy io mandritra ny 2 ora, raha tsy izany dia hisokatra aminao izany. Mantra amin'ny vola dia tokony vakiana miaraka amin'ny finoana miavaka ary miadana, mba hahafahanao mampifaly ny andriamanitra. Azo averina averina indraindray in-108 na adiny iray izany. Raha te hanisa ny famerimberenana, dia ampiasao ny kofehy eo amin'ny kofehy. Cycle mandritra ny famerenanao ny mantra - 10 na 40 andro.
Ny mantra mahery indrindra amin'ny vola dia Manibhadra:
Námo Ratna trayaya namo manibhadraya savily yaksha Hay Patai syadaya thedan Healey manibhadra Healey Healey manibhadra keels manibhadra keels keels manibhadra tsyli manibhadra tsyli tsyli manibhadra tsulu manibhadra tsulu tsulu manibhadra DVGA manibhadra DVGA DVGA manibhadra manodidina manibhadra manodidina fihodinana manibhadra kuru manibhadra Kuru Kuru manibhadra Sura manibhadra Sura Sura menebhadra sarva artham ahy sadhaya svaha tadyatha moyen sutputane surume sumati surathe sasmavate hilake hilakali purne sidhe bhadra healy healy matchha ehiko niche ehiso niche ehigo niche Waha.
Mantras of Richards:
Ho an'ny krim-pifamoivoizana an-tsokosoko dia tsy maintsy mamolavola.
Ramabhadra-mahashavasa-Raghuveer-nripottama-dashasyantakam-moms-dehi Raksha-me-Paramo sriyam.
Manto Ganesha manintona vola
Genesha no andriamanitra malaza Hindu izay manampy amin'ny fanatsarana ny toe-bolany ary manome fanohanana amin'ny asa rehetra.
Voalohany, avereno in-telo ity mantra ity:
Ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo manerana izao tontolo izao,
Ary lazao izao:
Ho an'ny mpivarotra amoron-trano dia tsy misy dikany raha tsy misy ny fiarovana.
Famoahana hafa an'ny mantra an'ny Genesisy, izay hanampy amin'ny fanombohana ny raharahanao manokana ary hanala ny rehetra sakana amin'ny làlana:
Money mantra amin'ny finday
Tsy maintsy vakiana ao anatin'ny 77 andro io safidy io. Efa eo antenatenan'io vanim-potoana io, dia ho hitanao fa manatsara ny toe-bolanao. Ny mantra dia mitovitovy amin'izany: 7753191. Zava-dehibe ny mamaky ny isam-batan'olona tsirairay: fito sy dimy dimy sy telo sivy.
Mantra ho an'ny fahombiazan'ny fiarahamonina
Ity safidy ity dia tokony vakina 2 andro monja. Mba hihazonana orinasa efa misy, vakio indray ny mantra indray mandeha isam-bolana:
Ho an'ny mpiara-mitantana dia mamaritra ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiarahamonim-pirenena.
Mantras ny harena
Ahoana no hanadiovana ny trano amin'ny ratsy?
Feng Shui maniry karatra
Zava-mahagaga misy vato
Fampitaovana mandeha amin'ny herinaratra
Chakras - Famaritana
Inona no atao hoe nofinofy?
Trout ao anaty foitra - fantsom-bovoka mahavariana amin'ny trondro mena
Ahoana ny fampiroboroboana ny firaisana?
Sary ho an'ny trano fialan-tsasatra ao amin'ny Provence
Paparazzi dia naka sary ny Kylie Jenner bevohoka
Sakafo ara-tsakafo ho an'ny fatiantoka
Modely modely modely 2013
Tanàna Ghost of the World
Ny fananganana kôkôma eny an-kalamanjana eo amin'ny trellis
Ahoana no hitehirizana menaka oliva?
Ny parrot dia manana fitomboana eo amin'ny vavony
Sakafom-bary 60 l
Lakbi - Lohataona 2016
Ahoana ny fomba hanamboarana ny voninkazo Kalanchoe?